Fampianarana Photoshop: Fampisehoana indroa | Famoronana an-tserasera
Fampianarana Photoshop: Fampisehoana indroa
Betsaka ny fiheverana atao rehefa manitsy sary. Ary ny fahaizantsika mamorona no afaka mahatonga antsika tetik'asa marobe amin'ny maodely iray ihany, amin'ny fomba izay hahamora ny fahafantarana ny fomba fikirakirana teknika famolavolana marobe mba ho feno, tsy ny momba ny takinay ihany fa ny fangatahan'ireo mpanjifantsika ihany koa.
Amin'io lafiny io, ity lahatsoratra ity dia hanolotra ny fomba fiasa ilaina mahazo ny vokan'ny fampiroboroboana indroa amin'ny alàlan'ny fandaharana adobe photoshop, amin'ny fomba ahafahan'ny mpampiasa manao an'io vokatra io isaky ny maniry izy ireo.
Andao atomboka ny fampianarana Photoshop: Double Exposure
Amin'io lafiny io, ny dingana hanombohana ny fizotran'ny famoronana ny vokany roa heny manomboka izao ny fampirantiana:
Tokony hofidintsika aloha ny a sary izay tsy miandany amin'ny lafiny loko misy azy. Ny sary mainty sy fotsy dia azo raisina ihany koa.
Hanohy hatrany isika manova ny famirapiratana ary mifanohitraMba hanaovana izany, hampiharintsika ny baiko Sary> Fanitsiana> Haavo.
Tarihinay miankavia ny tsipika slide fotsy ary ataontsika mazava kokoa ny sary. Torak'izany koa, hotaritarintsika mankamin'ny ilany ankavanana ilay mpikorisa mainty, izay hamaranantsika amin'ny alàlan'ny fampidirana fifanoherana ary kitiho ny safidy OK.
Con ny fitaovana borosy Hanao minitra vitsy vitsivitsy izahay hamahana ny pitsopitsony mety misy amin'ny sarinay, amin'ny fomba izay akaiky kokoa azy hatramin'ny lafatra tonga lafatra.
Miaraka amin'ny baiko Menu> Selection> Atsimbadika izay hofidintsika ny wand mahagaga, hanohy hanafoana ny toerana misy ny sarinay izahay.
Miaraka amin'ny fampiasana ny fitaovana fanidiana, tsindrio ny safidy Refine Edge ao amin'ny tontonana fanaraha-maso. Mandeha amin'ny maody "View" izahay ary manova ny fampisehoana ny sary mba hahamora ny fanovana anay.
Manaraka, ao amin'ny fizarana amin'ny detection edge hampitomboinay ny sandan'ny radius, amin'ny fomba lasa tsy dia henjana ny sisiny ary azo atao ny mahita antsipiriany toy ny volo. Ankehitriny, ao amin'ilay faritra handefasana azy dia hisafidy a izahay sosona vaovao misy sarontava sosona.
Izany dia mety ho namorona dika mitovy amin'ny anay sary tsy misy fototra miafina ho azy avy amin'ny sarontava sosona.
Hamorona izahay sosona vaovao eo ambanin'ilay saron-tava, hofidintsika ny fitaovana vilany fandokoana ary hofenointsika ny loko sosona miaraka amin'ny loko tiany.
Avy eo dia sokafanay ny sary faharoa hampiasainay ary hotaritarinay mankany amin'ny antontan-taratasinay izany.
Mametraka izahay notaritaritina nankamin'ny sosona sary ilay sary fa niasa izahay. Miaraka amin'ny soson'ny sary izay nitarihanay ny antontan-taratasy voafantina, dia tsindrio ny fibaikoana ary tsindrio saron-tava amin'ny sary voalohany. Raha vita tsara izany rehetra izany dia afaka mahita ny silhouette an'ny zavatra ampiasaintsika mifanaraka isika a voafantina ambadika eo amin'ny farany ambany izay nitarihanay azy.
Safidintsika ny sary izay tarihintsika (izay hampiasainay ho lasa ambadika) ary mifidy ny safidy manampy sarontava mba hamonjy ny sary ary hampiasa ny ampahany aminy fotsiny izay mahaliana antsika.
Raha vitantsika ny manao tsindrio ny safidy icono amin'ny rojo eo anelanelan'ny sary kely sy ny sarintanin-tsary ao amin'ny tontonana sosona, azontsika atao ny mahita ny fisarahan'ny sosona amin'ny sarontava azy ary afaka mamindra na mihodina ny sary ao anaty saron-tava izy fa tsy mila mamindra ny satrony manontolo.
Averinay ny sary malalantsika ary atosika mankany amin'ny sosona sary izay hampiasainay ho lasa ambadika.
Manohy ny manaova monochrome sary, mba hahafahana mampifanaraka azy amin'ny paleta miloko sary. Amin'ity fisintomana fisintahana ity efa voafantina dia ampiasainay ny Baikon'ny sary> Fanitsiana> Desaturate mba hamadihana ny sarinay ho grayscale.
Mandeha amin'ny menio izahay ary mampiasa ny baiko Sary> Fanitsiana> hue / saturation. Izahay dia manamarina ilay boaty miloko amin'ny zorony ambany ankavanana amin'ny tontonana mba hahafahantsika manova ireo loko rehetra ananan'ny sarinay. Manaraka izany, hamboarinay ny lanjan'ny feo ho 18 sy ny haavon'ny saturation amin'ny sanda lehibe mihoatra ny 10 ary safidio ny safidy Okey.
Tsindrio eo ankavanana ny saron-tsaron'ilay soson-kevitray lehibe ary ao amin'ny menio mitete-midina dia misafidy mampihatra sarontava.
Aorian'ny sy ao amin'ny tontonana sosona manova ny fomba fampifangaroana isika manomboka amin'ny soson'ny sary malalantsika ka hatramin'ny raster.
Raha nahavita tsara ireo dingana rehetra ireo isika dia tokony efa niatrika an'io vokany io, noho izany. io no tokony ho faran'ny fotoantsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Fampianarana Photoshop: Fampisehoana indroa
Banky sary maimaimpoana 17